XOG : FARMAAJO oo Masuuliyiintii Ugu horeeyay Xil u Magacaabaya Magac | Nabadoon Online & Nabadqaad .com
XOG : FARMAAJO oo Masuuliyiintii Ugu horeeyay Xil u Magacaabaya Magac
Feb 14, 2017	Share
Iyadoo ay soo dhowaatay la wareegista xilka ee madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa waxaa soo dhacaya warar ku saabsan xilalkii ugu horeeyay ee madaxweyne Farmaajo u magacaabi doono maamulka madaxtooyada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in agaasimaha cusub ee Madaxtooyada uu noqon doono Thabit Cabdi Maxamed oo hore u soo noqday agaasime xigeenka Madaxtooyada xilligii Xasan Sheekh isla markaana uu abti u yahay madaxweynihii hore.
Thaabit oo hadda ah safiir ku xigeenka Soomaaliya ee Mareykanka waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne Farmaajo, waxaana doorashadiisii kadib uu noqday mid kamida madaxda ugu dhow Madaxweyne Farmaajo.
Warar la isla dhex marayo ayaa iyaguna sheegaya in Taliyaha ciidamada ilaalada Madaxtooyada loo magacaabi doono Gen. C/llaahi Cali Caanood oo ka mida taliyeyaasha ciidamada xoogga dalka oo isla xilkan kasoo qabtay dowladii Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Ragga kale oo ka hadalhayo inay ka howlgeli doonaan madaxtooyada waxaa ka mida Siyaad Maxamuud Shire oo isna ah madaxa sii wada protocol-ka madaxweyne Farmaajo, waxaana la sugayaa in magacaabidda oo noqon doonta tii ugu horeysay ay soo baxdo saacadaha soo socda.